CEELBUH:- Shirar beeleedyo ayaa todobaadkii hore ka dhacayy magaalada Ceelbuh ee ku taal gobolka Sanaag shirkaas oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay waxaana aad loogu falanqeeyey arimaha Deegaanka iyo Dhuxul shidida sidii lagu joojin lahaa waxaana isla markaan shirkan laga soo saaray go'aamo ku saabsan ilaalinta iyo horumarinta degaanka .
Arimahaas saamaynta ku yeeshay shirarkaas ayaa waxa ugu weynaa iyadoo si aad ah dhuxul looga shidayo Soolka ka badbaadey gacmaha ka xaq daran ee gubidda iyo goynta geedaha oo si arxan darro ah loo rujinayo dureemada , loona gubayo galoolka, soolka sida ba'an faraha loogula jiro ayaa waxa ka mid ah :
Sida aad ku aragtaan Sawirkan kore waxaa shirka kasoo qeyb galey odayaal iyo waxgarad iyo weliba aqoon yahano dibada iyo dalkaba ka yimi.
Go'aamadaas oo ay ku saxiixnaayeen odayaal faro badan iyo aqoonyahan kale ayaa waxay u qornaayeen sida :-
Waxan beesha Warsangeli ugu baaqaynaa meel marinta go'aamadii shirkii Buraan ee la saxiixay 20.07.2006, ee mamnuucayey xaalufinta degaanka.
Waxan taageero buuxda u haynaa mashaariicda horumarinta degaanka beesha Warsangeli sida mashruuca muhiimka ah ee dekedda Laasqoray iyo mashruuca dooxada Xubeera.
Waxan dhallinta beesha Maxamed Naallaye uga digaynaa iney ka mid noqdaan kuwa guba ama gooya degaanka beesha Warsangeli, cidii lagu soo eedeeyona waa in la xidho lana dhaqan celiyo.
Waxan ugu baaqaynaa beelaha kale ee Warsangeli iney nala qaataan arintan, si loo badbaadiyo degaanka Warsangeli ee la gubayo lana goynayo.
Waxan hay'adaha wadaniga ah, maamulada iyo qurba joogta Warsangeliba ugu baaqaynaa iney shaqo abuur u sameeyaan dhallinta dhibaatada ku haysa degaanka ee gubta ama goysa dhirta , si ay uga kaaftoomaan arimahaas dhibta ku ah degaanka
Waxan u mahad celinaynaa hay'adda Horn Relief oo wacyi gelin iyo gacan kaleba ka geysata ilaalinta degaanka.
Prof. Axmed Faarax Cali ( Xaaji-bidaar) oo shirweynaha u sharaxaya ahmiyadda degaanka
Sawirka aad aragtaan waa Nabadoon MaxamuudAxmed Yusuf oo ku magac dheer Maxamuud Xawar oo ka mid ah Nabadoonada sida weyn looga yaqaano gobolka Sanaag oo shirkan bal libaaxa ka cayaarey.
Magacyada Odayaasha iyo Aqoonyahanka go'aamadan soo saaray :
NB. Maxamuud Axmed Yuusuf ( Xawar).
Ciise Dhaaye Jibriil.
Jibriil Dhaaye Jibriil.
Xasan Nuur Ciise ( Xasan Guure).
C/laahi Cabdi Saalax.
Maxamuud Xasan Cirro-nuug
C/laahi Dhaaye Jibriil
Badmaax Jaamac Ciyoon.
Siciid Badmaax Jaamac
Cabdi Xaaji Yuusuf.(Bidix)
Maxamed Cali Barre .
Muuse Maxamed Cabdi
Muuse Maxamed Irgin.
Ciise Saalax Darmaan.
Cismaan Nuur Ciise.
Cabdi Ciise Saalax.
Siciid Dhaaye Jibriil.
Prof. Axmed Faarax Cali (xaaji).
Maxamuud Faarax Cali.
Maxamed Ismaaciil Jaamac.
C/rashiid Maxamed Jaamac.
Waxaa Manchester-UK idinka Soo gudbinaya C/Risaaq Shirwac--